Barnaamijyada soo kabashada card SD waa hab fiican si loo hubiyo in wixii kaloo lagu sameeyo gudaha wakhtiga oo waafaqsan shuruudaha isticmaala. Waxaa sidoo kale in la xuso in ugu fiican oo gobolka ka mid ah adeegyada farshaxanka ee la xidhiidha barnaamijyada soo kabashada card SD waa suurto gal oo keliya haddii qaybaha kala duwan yihiin marka la barbar dhigo oo user helo heshiis ugu fiican ka dib markii mid ka mid baadhaya waxyaabahan. Ka dib markii qaar ka mid ah barnaamijyada software-kabashada card SD oo loo isticmaali karo si loo hubiyo in user helo natiijada ugu wanaagsan ee la xidhiidha soo kabashada xogta.
Mid ka mid ah barnaamijyada ugu fiican sugan si loo hubiyo in wixii kaloo la sameeyo dib u dhac kasta oo aan u Fiican la siiyaa user iyadoo la kaashanayo gobolka of technology tahay in ayaa loo isticmaali jiray in arrintan la xiriira. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in sidoo kale la hubiyo in buuga barnaamijka ayaa sidoo kale akhri Wondershare website-ka rasmiga ah si user ah ka heli kartaa ugu fiican oo gobolka ka mid ah muuqaalada tahay oo aan wax arrintan iyo dib u dhac.
• Barnaamijka labaduba waa in ay dadka isticmaala laylis iyo khubarada
• Wixii celcelis ahaan dadka isticmaala hab saaxir ah ayaa gundhig
• Barnaamijka ayaa laga yaabaa in ka badan is-dhexgal marka ay timaado interface ka.
• fudayd ee la isticmaalo ka dhigayaa walwalsan u casriga ah ee isticmaala bixio mararka qaarkood.
2. jilicsan kabashada file kaamil ah
In ay iftiin miisaanka iyo qaababka sahlan in lagu gundhig user inay hubiyaan in ugu fiican oo gobolka ka mid ah adeegyada farshaxanka waxaa loo isticmaalaa in arrintan la xiriira iyo element guud ee awesomeness waa sii raagayaan dhigi. Isticmaalka barnaamijka waa cadaalad ah oo fudud oo soo kabashada xogta sababtay sidoo kale waa arrin aan dhamaan. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in la hubiyo in barnaamijka waxaa loo isticmaalaa sida tilmaamaha in ay yimaadaan sameeyo.
• Barnaamijka waa mid aad u yar yar oo cabbirka iyo gubtay ku dhawaad ​​jirin meel
• Waa arrin aad u fudud in ay isticmaalaan oo ay hayaan iyadoo wax dhibaato ah
• The files recoverable marnaba previewed by barnaamijkan
• The files tirtiray marnaba ku cad shuruudaha caafimaadka.
3. fudayd kabashada xogta Us
Sida saxda ah oo waafaqsan magaca sifooyinka barnaamijka inay hubiyaan in ugu fiican oo gobolka ka mid ah design tahay in ay helaan loo adeegayaashu si ay u heli karaan heshiisyo ugu fiican oo aan wax arrintan iyo dhibaato. Horumarinta ee barnaamijka lagu sameeyey fudud iyo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in user oo aan xirfad kombiyuutar kasta u isticmaali karaa iyada oo aan la arrinta iyo dhib. Si aad u hesho sida ugu fiican oo gobolka ka mid ah muuqaalada tahay iyo in lagu furo iman kara run user waa in akhri buuga ka mid ah shuruudaha iyo xaaladaha ka hor inta uusan bilaaban rakibo.
• The goobaha iyo shaashadaha la xiriira in arbushin ilaa halka loo xirxiro waa waa mid aad u fudud in la fahmo.
• files ayaa si fudud loo previewed karaa hor inta aan la soo kabsaday sahlaysa in user.
• Xogta in la soo kabsaday karaa waa 2 ama hoos 2GB in total.
• version ayaa la qaadan karo ma aha waxaa sida disk rakibo adag ayaa loo baahan yahay.
4. kabashada xogta falsan
Sida magaca muujinaysaa barnaamijka waa xaqiiqo ah oo xigmad leh ka qaataan hubinta in ugu fiican iyo farsamooyinka ugu horumarsan waxaa loo isticmaalaa in la hubiyo in user helo natiijada ugu wanaagsan ee arrintan la xiriira. Waxaa sidoo kale ku taliyey in la hubiyo in user waa inuu isticmaalaa software ka hoos khabiir kormeer haddii xirfadaha kombiyuutarka waa celcelis ahaan sida ay u hubiso in dhammaan sifooyinka barnaamijka waxaa lagu arki aan wax arrintan oo dhibaato ka dhigi doonaa. User ayaa ka heli kartaa oo kaliya mid ah qaababka ugu fiican haddii barnaamijka waxaa loo isticmaalaa si waafaqsan shuruudaha in ka hor yihiin.
• Barnaamijka waa mid aad u fududahay in la isticmaalo iyo Mudanayaasha guud sidoo kale waa mid fudud si loo soo dajiyo.
• Barnaamijkan wuxuu soo kaban karto, files badan waqti isku mid ah.
• files ayaa waxaa lagu ma kaalinta ay goobta asalka ah.
• user ma ordi karaan barnaamijka on OS ahayn daaqadaha.
5. Soo Celinta
Barnaamijku waxa uu la soo saaro by Inc TELUS ah oo la og yahay ee ugu fiican oo gobolka ka mid ah adeegyada tahay in arrintan la xiriira. Interface waa mid aad is-dhexgal iyo fudayd ee la isticmaalo waa mid ka mid ah arrimaha ugu waaweyn ee ay keeni user ku wajahan this piece casriga ah mid laga cabsado. Si loo hubiyo in user helo ugu fiican marka la eego xogta soo kabashada waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in barnaamijka aan la rakibo oo keliya, laakiin waa in lagu hayaa nidaamka si aad u samaysay baahan yahay oo aan wax arrin oo dhib.
• Goobta disk in barnaamijka gubtay, ka yar tahay 500KB
• Doorashada badan kabashada file jiro si ay u taageeraan user.
• Faylka recoverable marna muujiyey barnaamijkan.
• The Win 8 OS aan ay taageerto barnaamijkan iyo waxay siinaysaa khaladaad.
Geedi socodka ee soo kabsaday xogta laga kaadhka xusuusta dhex Wondershare Data Recovery
Waa mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo habka ugu horumarsan si ay u hubiyaan in Wondershare Data Recovery waxaa loo isticmaalaa habka ugu wanaagsan oo waafaqsan shuruudaha isticmaala. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in la hubiyo in habka ah in la halkan ku xusan lahaa waxaa la socda sida tilmaamaha si kaliya ma ahan wixii kaloo la sameeyo hab fiican lakiin user sidoo kale helo heshiis fiican ee aan arin kasta oo la sameeyo dhibaatada. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in ay isticmaalaan isla URL ee download software si loo hubiyo in ugu fiican in la siiyo nidaamka sida file exe ee website-ka rasmiga ah lama updated oo keliya, laakiin waxa ay sidoo kale keenaysaa in software dhab ah. Geedi socodka waa in la raaco si loo hubiyo in faylka la soo kabsaday ayaa lagu sharaxayaa sida under:
1. user wuxuu u baahan yahay in la hubiyo in barnaamijka dhab ah waxaa soo bixi URL http://www.wondershare.com/data-recovery/guide.html si user helo habka ugu fiican in bilowga waa suurto gal:
2. user waa in markaas hubiyo in nooca file in ay tahay in la soo celiyo waxaa loo doortay in nidaamka uu helo ugu fiican iyo kan gobolka ee xawaaraha farshaxanka lagu soo helo oo kaliya nooca in:
3. user ayaa markaas u baahan yahay in la hubiyo in meesha uu file lumay waxaa sidoo kale lagu qeexay si aad u hubiso tht kaliya qayb ka mid ah in nidaamka la baaray:
4. kabsaday faylasha markaas waa in loo arko iyo kuwa ay tahay in la soo celiyo waa la saxday in samaysay wixii kaloo ah:
> Resource > Memory Card > Top 5 SD software kabashada card